Ku caan bixi dareemayaasha heerkulka - Warka - Dongguan Jianxing Products Outdoor Co., Ltd.
Dareeraha heerkulka IR
Qalabka dareeraha heerkulka
Dareeraha heerkulka dareeraha
Dareeraha heerkulka Stator
Qaadista dareeraha heerkulka baadiyaha
Steam dareeraha heerkulka
Dareeraha heerkulka hawada
Gudbiye heerkulka iyo maamusha
Qalabka dareeraha baska ku lifaaqan
Dareeraha heerkulka dhuumaha
Xarig heerkulka sareeya
Hoyga > Wararka > Warka Warshadaha
Baahiyaha dareemayaasha heerkulka
Transducer heerkulka waxaa loola jeedaa dareemayaal dareemi kara heerkulka una rogi kara calaamadda soosaarka la isticmaali karo Dareeraha heerkulka ayaa ah qaybta ugu muhiimsan ee qalabka cabbirka heerkulka, waxaana jira noocyo badan. Marka loo eego habka cabirka, waxaa loo qaybin karaa laba qaybood: nooca xiriirka iyo nooca xiriirka. Marka loo eego astaamaha qalabka dareemayaasha iyo qaybaha elektaroonigga ah, waxaa loo qaybin karaa laba nooc: caabbinta kuleylka iyo kuleylka.
Kala soocida ugu weyn
Qaybta ogaanshaha ee dareeraha heerkulka xiriirku wuxuu xiriir fiican la leeyahay sheyga la cabbiray, oo sidoo kale loo yaqaan heerkulbeegga.
Heerkulbeeggu wuxuu ku gaaraa isku dheelitirnaanta kuleylka marinka ama kala qaadista, sidaas darteed qiimaha heerkulbeeggu wuxuu si toos ah u tilmaami karaa heerkulka shayga la cabbiray. Guud ahaan, saxnaanta cabbirka ayaa sarreeya. Qiyaas ahaan cabirka heerkulka, heerkulbeegga ayaa sidoo kale cabbiri kara heer-kulka qaybinta shayga. Laakiin u dhaqaaqista walxaha, bartilmaameedyada yar yar ama walxaha leh awood yar oo kuleyl ah, khaladaad cabir weyn ayaa dhici doona. Heerkulbeegyada sida caadiga ah loo isticmaalo waxaa ka mid ah heerkulbeegyada bimetallic, heerkulbeegyada dareeraha dhalada ah, heerkulbeegyada cadaadiska, heerkulbeegyada iska caabinta, heerkulbeegyada, iyo heerkulbeegyada. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa qaybaha sida warshadaha, beeraha, iyo ganacsiga. Dadku badanaa waxay u isticmaalaan heerkul-beegyaashan nolol-maalmeedka. Iyadoo la adeegsanayo adeegsiga ballaaran ee tikniyoolajiyada 'cryogenic technology' ee injineernimada difaaca qaranka, tikniyoolajiyadda hawada, metallurgy, elektaroniga, cuntada, daawada, kiimikada kiimikada iyo qeybaha kale iyo cilmi baarista tikniyoolajiyad dhismeedka, heerkulbeegyada cabirayo ee cabbiraya heerkulka ka hooseeya 120K ayaa la sameeyay, sida heerkulbeegyada gaaska cryogenic, uumi Heerkulbeegga Cadaadiska, heerkulbeegga acoustic, heerkulbeegga cusbada paramagnetic, heerkulbeegga qiyaasta, heerkulka hooseeya ee caabbinta kuleylka iyo heerkulbeegga heerkulka hooseeya, iwm. Heerkulbeegyada heerkulka hooseeya waxay u baahan yihiin cabbir yar, saxnaan sarreeya, soocelin wanaagsan iyo xasillooni. Iska caabbinta kuleylka kuleylka ah ee muraayadda ka samaysan oo ka samaysan muraayad silica sare leh oo carburized ah oo la shiilay waa nooc ka mid ah dareemayaasha heerkulka heerkulbeegga heerkulka hooseeya, kaas oo loo adeegsan karo in lagu cabbiro heerkulka u dhexeeya 1.6 illaa 300K.
Qaybaheeda xasaasiga ahi isuma taabtaan sheyga la cabiray, waxaana sidoo kale loo yaqaan aaladda cabbirka heerkulka ee aan taabashada lahayn. Qalabka noocan ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu cabbiro heerkulka dusha sare ee walxaha dhaqaaqa, bartilmaameedyada yaryar iyo walxaha leh awood kuleyl yar ama isbeddelo heerkul deg deg ah (ku-meelgaar ah), sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu cabbiro heerkulka qaybinta aagga heerkulka.
Qalabka cabbiraadda heerkulka ee aan taabashada lahayn inta badan la isticmaalo wuxuu ku saleysan yahay sharciga aasaasiga ah ee shucaaca jirka madow waxaana loo yaqaan aaladda cabbirka heerkulka shucaaca. Heerkulbeegga shucaaca waxaa ka mid ah habka iftiinka (eeg pyrometerka indhaha), habka shucaaca (fiiri pyrometer-ka shucaaca) iyo habka midabaynta (eeg heerkulbeegga midabka leh). Dhammaan noocyada hababka cabbirka heerkulka shucaaca ayaa kaliya cabbiri kara heerkulka iftiinka iftiinka, heerkulka shucaaca ama heerkulka midabka. Kaliya heerkulka loo cabiro jirka madow (shey nuugaya shucaaca oo dhan oo aan ka tarjumaynin iftiinka) waa heerkulka dhabta ah. Haddii aad rabto inaad go'aamiso heerkulka runta ah ee shayga, waa inaad saxdaa dusha sare ee sheyga. Qulqulka dusha sare ee walxaha kuma xirna oo kaliya kuleylka iyo dhererka, laakiin sidoo kale wuxuu ku xiran yahay gobolka dusha sare, filimka daboolka iyo qaab dhismeedka, sidaa darteed way adag tahay in si sax ah loo cabbiro. Soosaarida otomaatiga ah, badanaa waa lagama maarmaan in la isticmaalo cabbirka heerkulka shucaaca si loo cabbiro ama loo xakameeyo heerkulka dusha sare ee walxaha qaarkood, sida heerkulka wareejinta birta, heerkulka duudduuban, heerkulka been abuurka iyo heerkulka biraha kala duwan ee la shubay ee foornooyinka dhalaalaya ama iskutallaabyada birta. Duruufahaas gaarka ah awgood, cabirka culeyska dusha sare ee shay aad ayuu u adag yahay. Cabirka tooska ah iyo xakameynta heerkulka dusha adag, muraayad dheeri ah ayaa loo isticmaali karaa si loo sameeyo dalool madow oo madow oo ay weheliso dusha cabirka. Saamaynta shucaaca dheeraadka ah waxay kordhin kartaa shucaaca wax ku oolka ah iyo isku-dheellitirka soosaarka wax ku oolka ah ee dusha laga qiyaaso. U adeegso isugeyn wax ku ool ah soo saarida si aad u saxdo heerkulka cabirka ee mitirka, ugu dambeyntiina hel heerkulka dhabta ah ee dusha la cabbiray. Muraayadda dheeriga ah ee ugu caansan waa muraayad xagjir ah. Tamarta shucaaca baahsan ee dusha laga cabbiro ee udhow bartamaha hareeraha ayaa dib loogu muujiyaa dusha sare muraayadda xagjirka ah si loo sameeyo shucaac dheeri ah, taas oo kor u qaadeysa isku-dheellitirka wax-soo-saarka wax-ku-oolka ah, halka ay Îµ tahay dusha sare ee walxaha, iyo Ï waa milicsiga muraayada. Marka laga hadlayo cabbirka shucaaca ee heerkulka dhabta ah ee gaaska iyo dareeraha warbaahinta, habka loo gelinayo tuubo maadada u adkaysata qoto dheer si loo sameeyo dalool madow ayaa loo isticmaali karaa. Isku-dheellitirka wax-soo-saarka wax-ku-oolka ah ee saabka cilladda ka dib marka la gaaro isu-dheellitirnaanta kuleylka leh dhexdhexaadka waxaa lagu xisaabiyaa xisaab. Qiyaasta otomaatiga ah iyo xakamaynta, qiimahan waxaa loo isticmaali karaa in lagu saxo cabirka saqafka hoose ee cabirka (taas oo ah, heerkulka dhexdhexaadka) si loo helo heerkulka dhabta ah ee dhexdhexaadka.
Faa'iidooyinka cabbirka heerkulka ee aan lala xiriirin karin: Xadka sare ee cabbirka kuma koobna caabbinta heerkulka ee walxaha dareemaya heerkulka, sidaa darteed ma jiro wax xaddidan heerkulka ugu sarreeya ee la qiyaasi karo mabda 'ahaan. Heerkulka sare ee ka sarreeya 1800 ° C, hababka cabbirka heerkulka ee aan lala xiriirin ayaa badanaa la isticmaalaa. Horumarinta tikniyoolajiyada infrared, cabbirka heerkulka shucaaca ayaa si tartiib tartiib ah ugu fiday iftiinka muuqda illaa infrared. Waxaa laga qaatay ka hooseeya 700 ° C illaa heerkulka qolka, xallintuna aad ayey u sarreysaa.
Meelaha ka khaldamaya mitirrada heerkulka iyo xallinta dhibaatooyinka guud ee mitirrada heerkulka
Ma taqaan qeexitaanka iyo noocyada fiilooyinka gaarka ah?
Cinwaanka: Dhismaha 3, Nabadsugida Warshadaha Warshadaha, Lambarka 171 gongchang Road, Degmada Cusub ee Guangming, Magaalada Shenzhen, Gobolka Guangdong
Weydiimaha ku saabsan wax soo saarka ama pricelist, fadlan ka tago aad email noogu iyo waxaan la xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood. Waxaan leenahay dareeraha Heerkulka, Cabirka dareeraha heerkulka, dareeraha heerkulka Stator, Qaadista dareeraha heerkulka oo leh CE. Qiimaha dareeraha heerkulka, Cabirka dareeraha heerkulka, dareeraha heerkulka Stator, Qaadista dareeraha heerkulka ayaa ugu hooseeya laakiin leh tayo wanaagsan.
Xuquuqda daabacaadda 2020-2021 Testeck Co., Ltd. 粤ICP备12049720
Xiriirimaha Sitemap RSS XML